अहिलेको लडाई जनबल र धनबल बिच हुँदैछ, म जनबलमा बिश्वास गर्छु : चन्द
बिहीबार , बैशाख १५, २०७९ मा प्रकाशित
सरकारले एकै चरणमा देशभरी स्थानिय तहको निर्वाचन गर्नका लागी बैसाख ३० गते मिति तेकेसंगै राजनितिक दल तथा स्वतन्त्र उमेदवारहरुले बैसाख ११ र १२ गते आ–आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएका छन् । एकातर्फ सत्ता गठबन्धन त अर्को तर्फ नेकपा एमाले लगायतका दलहरु छन् । धनगढी उप महानगरपालिकामापनि सत्ता गठबन्धन, नेकपा एमाले र स्वतन्त्र उमेदवारबिच त्रिपक्षीय प्रतिस्प्रधा हुने देखिएको छ । यही निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी नेकपा एमालेका तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा उमेदवारी दिएका रण बहादूर चन्दसंग स्टेट सेभेन अनलाइनका सह सम्पादक दिनेश बिष्टले गरेको कुराकानी
धनगढी उप महानगरपालिकाको प्रमुखमा तपाइको उमेदवारी किन ?
हेर्नुस यो धनगढी उप महानगरपालिका प्रदेशकै बिकासको दिशा निर्देश गर्ने ठाउँ हो । पछिल्लो ५ बर्षे कार्यकालमा नेपाली काग्रेंसका नृप बहादूर वडले कुनै काम गरेको पाइएन उहाँले गरेको पहिलो निर्णयनै अलपत्र छ । यो उप महानगरपालिकामा बिकासका योजना, कार्यालय सबै अस्तब्यस्त छ यो अस्तब्यस्त धनगढी उप महानगरलाई ब्यवस्थित बनाउन मैले आउनुपर्ने देखियो र मेयरको उमेदवार पार्टीले बनाएपछि मैले उमेदवारी दिएको छु । बिद्यार्थी जिवनदेखीनै पुर्णकालिन कार्यक्रता भएर लागेको मैले अहिलेसम्म कुनै लाभका पद पाएको थिएन, मैले यो समाज र देशका लागी गरेका कामको मुल्याकंन गर्दै अहिलेको परिस्थीतीमा मेरो आवश्यक्ता पार्टीले देख्यो म पार्टीलाई धेरै धेरै धन्यबाद दिन चाहान्छु ।
तपाइका एजेण्डा कस्ता छन त ?
धनगढी बजार क्षेत्रलाई सफा सुग्घर र ब्यवस्थित बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ, बाटोको अवस्था, पार्किङ त्यस्तै, अटो रिक्साले बजार जाम परिरहेको छ, जथाभावी फोहोरले धनगढी कुरुप छ पहिलो नम्बरमा यो ब्यवस्थि तगर्ने छु । यो सहरलाई ब्यवस्थित गर्ने जिम्मा जनप्रतिनिधीको हो तर यसमा निबर्तमान भएका धनगढीका मेयरको ध्यान गएको पाइदैन । परम्परागत रुपमा चलेको धनगढीलाई आधुनिकिकरण गर्न सकिएन, आधुनिक शहर बनाउने मेरो प्रार्थमिकता रहने छ ।
धनगढी उप महानगरपालिकाका १९ वटा वडाका धेरै जनता गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, बिधुतबाट बञ्चित छन् । धेरैले पायो होला अँझै निम्न बर्गका नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । हामी निर्वाचित भएको २ बर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वच्छ पानी र घरघरमा बिधुत पु¥याउने लक्ष छ । धनगढीमा अब्यवस्थित बसोबासको निकै समस्या छ, नेकपा एमालेको सरकार भएका बेला आयोग बनेको थियो काम गरिरहेको आयोगलाई बिघटन गरिदियो । धनगढी उप महानगरपालिकाले त्यो बेला जग्गाधनी पुर्जा वितरण प्रकृयामा ढिला गरेपनि धेरै पालिकाले त्यो बेलानै वितरण शुरु गरिसकेका थिए । त्यतिबेलाको मेयरले चाहेको भए जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेर सकिन्थ्यो, अब हामी त्यो काम गर्नेछौँ ।
माध्यमिक शिक्षासम्म स्थानिय सरकारले हेर्छ, तर सामुदायीक बिद्यालयहरुको गुणस्तर बढाउने बिषयमा बिगतका जनप्रतिनिधीको ध्यान गएन । हामी यसको सुधार गर्छौ । र घर घरमै ज्येस्ठ नागरिक भत्ता, घर घरमै ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण, उपचार गर्ने स्वास्थ्यका योजना ल्याउनेछौँ सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी हुने छन् ।
शिवपुरी धाम, बेहडाबाबा मन्दिर लगायतका पर्यटकिय स्थल छन् । भादा होमस्टे, रानाथारु होमस्टेको बिकास गरी पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने छौँ । धनगढी ढुवाको समस्या उस्तै छ, मोहना र खुटियाले पुरै धनगढी डुवाउँछ, यो डुवान समस्या समाधानका लागी हामीले केन्द्रमा पहल गर्ने र हामी आफैले समाधान गर्ने कुरामा जोड रहन्छ ।
सामुदायीक बन धेरै छन् । ति बनहरुसंग सहकार्य गरेर घरेलु उधोग स्थापना गर्ने र रोजगारी श्रृजना गर्ने बिषयमा हाम्रो जोड रहने छ । युवा, बिद्यार्थीहरुलाई रोजगारमुलक तालिम दिने यस्ता बिबिध बिषय समेटेर हाम्रो घोषणापत्र तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने छौँ ।
निबर्तमान मेयर नृप वडले चुनावी नारा अनुसार काम गरेन भन्नुहुन्छ तपाइका यी योजना चाहीँ पुरा हुन्छन भन्ने कसरी बिश्वास गर्ने ?
गर्न नसक्ने कुरा बोल्दैन म जे बोल्छु त्यो गर्छु । निबर्तमान मेयरसापले धनगढीका अतिक्रमित खोलानाला खाली गर्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो तर कार्यकाल सकिदासम्म त्यो घोषणा पुरा गर्नुभएन । पहिलो निर्णयनै उहाँले पुरा गर्न सक्नुभएन अनी उहाँलाई बिश्वास गर्ने कुरा भएन । उहाँ त सर्वदलिय संयन्त्र देखी स्थानिय सरकार सम्म त्यही धनगढी उप महानगरमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिलेपनि काम शुन्य देखियो र यस कारण धनगढीबासी परिवर्तन चाहानुहुन्छ ।
बिकासको अवस्था हेर्नुस दयनिय छ, उपभोक्ता समितिमा पार्टीका मान्छे भर्ती गरेर काम गुणस्तरहिन गर्ने भ्रस्टाचार गर्ने काम देखिएको छ । त्यस कारण यो निबर्तमान नेतृत्वबाट सबै निराशा छन् । यसको बिकल्प हामीनै हौँ ।
भ्रस्टाचार भयो भन्नुभयो तपाइचाहीँ भ्रस्टाचार गर्नै हुन्न भन्ने के छ र ?
म जे बोल्छु त्यो गर्छु नसकिने कुराहरु म बोल्दापनि बोल्दैन, शुसासन कायम गर्ने कुरामा म दृढ संकल्पित छु । यो ब्यवहारमा देखाउँछु । अहिले देखिएको ढिलासुस्ती, अनियमितता लगायतको बेथिती मेरो कार्यकालमा देखिने छैन ।
तपाइले लामो समय राजनिति गर्नुभयो अब त्यो राजनिति गर्दाको लगानी अशुल गर्नका लागै मेयर बन्न लागिपर्नुभाहो ?
म बिद्यार्थी जिवनबाटै राजनिति शुरु गरेको ब्यक्ती हुँ । अनेराश्वबियुबाट शुरु गरेको राजनिति म केन्द्र र जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रमा काम गरे । मैले यो बिचमा कुनै आम्दानी हुने पद लिएको छैन, मैले कुनै ब्यवशायपनि गरेको छैन मैले राजनिति र समाजसेवानै गरे । मेरो जिवन खुल्ला किताबहो सबैले पढ्न पाउँछन्, यस्तो सदा जिवनमा मैले पैँसानै कमाउन चाहेको भए अन्य काम गर्थे नी त्यस कारण मेरो उद्देश्य पैँसा भन्दापनि बिशुद्ध समाजसेवानै थियो र म जनप्रतिनिधी बनेरपनि म सेवानै गर्ने हुँ म यो समाजका लागी जन्मेको हुँ बिशुद्ध सेव ागर्नका लागी म नगरको प्रमुखमा आउन खोजेको हुँ । मेरो बिगत हेर्दा हुन्छ कतै कुनै दाग लागेको छैन । त्यस कारण सबै उमेदवार भन्दा म मात्र योग्य छु लाग्छ । मेरो राजनितिक जिवन कुनै स्वार्थसंग जोडिएको छैन, मेरो पुरै उर्जावान समय यही समाजका लागी खर्चेको छु त्यस कारण मलाई अँझ सेवा गर्ने अवशर धनगढीबासीले दिनुहुने छ ।
मेयर बनेपछिपनि सदा जिवननै रहन्छकी नबन्दासम्म मात्रै हो ?
मेरो जिवन यही रहने छ हेर्नुहोला ५ बर्षपछि सोध्नुहोला कस्तो भएछ भनेर मेरो सम्पतिका बारेमा खोज्नुहोला । सामान्य सरकारी साधन श्रोत प्रयोग गर्ने कुरामा म गाडीनै चढ्दैन भन्दैन तर ति सुबिधा बाहेक म कुनै बिषयमा लालच राख्ने छैन । यहाँ भएका समस्या समाधान गर्ने र जनताको जिवनशैली परिवर्तन गर्ने मेरो चाहाना हो आफ्नो जिवनशैली परिवर्तन गर्नपो म उमेद्वार बनेको हुँ । जनताले भोट दिएर मलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि मैले त्यो श्रृण त तिर्नैपर्छ त्यस कारण म अधिकतम सेवा गर्ने छु ।
सुबिधा नलिने भन्दै सबैभन्दा बढी पैँसा कमाउने जनप्रतिनिधीपनि छन नी ?
अहिलेको लडाई जनबल र धनबल बिच हुँदैछ, म जनबलमा बिश्वास गर्छु । धेरै उमेदवारहरु पैँसा संकलन गर्दै छन रे, यो भन्दा अघी चुनावकै लागी भनेर जमा गरेका छन् रे । म संग प्रतिस्प्रधामा आउने धनबलले हुन तर म जनबलले निर्वाचन जित्छु । मसंग पैँसा छदापनि छैन म पैँसा खर्छ गर्नपनि सक्दैन मैले जिवनमा केही कमाउँदानी कमाएन भएको त्यही पैत्रिक सम्पति हो त्यसैमा बसेको छु । अबको नागरिक पैँसामा बिक्ने कोही छैन, समाज परिवर्तनका लागी अहिलेको धन होइन मेरो बिचारलाई यहाँका जनताले साथ दिने छन् ।
प्रतिस्प्रधा को सित हुन्छ ?
देशभरी गठबन्धनसित छ तर यहाँ हाम्रो प्रतिस्प्रधामा कोही आउँदैन ।